Wasiirka Maaliyadda Puntland oo kormeeray dhismaha cusub ee Dakhliga W/Maaliyadda Puntland (Sawirro+Video) – Wasaaradda Maaliyadda
November 29, 2021	in Warka
GAROOWE – Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane, Xassan Shire Cabdi ayaa kormeeray dhismaha cusub ee Dakhliga Wasaaradda Maaliyadda ee Gobolka.
Dhismahan, oo socday bilihii u dambeeyay ayaa meel wanaagsan maraya, waxana Wasiirka xog-dheeri ah ka siiyay madaxda shirkada wada dhismahan.
Xasan Shire, ayaa bogaadiyay shaqada socota waxana uu booqday qeybaha kore ee dhismaha.
Mudane Xasan Shire Cabdi
Dhismahan, oo ka kooban sadex dabaq ayaa horay waxaa u dhagax-dhigay Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane, Siciid Cabdullaahi Deni oo uu wahelyo Wasiirka Maaliyada.
Kharashaadka dhismahan ku baxaya waxaa bixinaya Dowladda Puntland, waana Cashuurtii laga qaaday shacabka oo dib loogu soo ceshay iyadoo lagu fulinayo mashaariic ballaaran oo ka qeyb qaadanaya horumarka ka socda Puntland.
Ku-simaha Agaasimaha guud ee W/Maaliyadda oo gaari ku wareejiyay Wasaaradda qaybta gobolka Karkaar(Sawirro)